ဗဟုသုတ မှတ်သားစရာ မြန်မာစကားပုံများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်) ~ ဒီမိုဝေယံ
1.Adjust burden to strength, like arrow to bow.
2.Although cowardly be slow to run. မရဲသော်လည်း ပြေးခဲစေ။
3.The anger of the prudent never shows. ပညာရှိအမျက် အပြင်မထွက်။
4.Arrows all gone before the battle begins. စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်။
5.As the doe gives birth toafawn the tiger eats it. သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း။
6.As to eating it, will it is covered with grit; but as to throwing it away, well, it is rich and luscious. စားရမှာလည်း သဲတရှပ်ရှပ်၊ လွှင့်ပစ်ရမှာကလည်း အဆီနဲ့ တ၀င်းဝင်း။
7.As you are fated to eat honey, bees swarm in your beard. စားရကံကြုံတော့ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲ။
8.Ask when you don't know, wash when you're dirty. မသိလျှင်မေး၊ မစင်လျှင်ဆေး။
9.At the sight of fresh fish away goes the roast. ငါးစိမ်းမြင်၊ ငါးကင်ပစ်။
10.Bad children? Blame the parents. သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း။
11.The black elephant dare not look at the royal white elephant's face.
12.Being afraid of the tiger he takes refuge with the lord Spirit, but the lord's Spirit is worse than the tiger. ကျားကြောက်လို့ ရှုင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး။
13.The bigger the tiger, the bigger the pug-marks. ကျားကြီးတေ့ာ ခြေရာကြီး။
14.A blind fowl came upon the rice-pot. ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး။
15.The blind man is not afraid of ghosts. မျက်ကန်းတစ်ဆေမကြောက်။
16.The care of one daughter equals that ofathousand cattle. သမီးတစ်ကောင် နွားတစ်ထောင်။
17.The cat jumps with joy when the forest is on fire. တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်။
18.Cheeks shinning because of gold earrings. ရွှေနားကပ်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်။
19.Clear water cannot be obtained fromawell that has just been dug.
ခုရေတွင်းတူး၊ ခု ရေကြည်သောက်၍ မရ။
20.Day will not break forahen's cackle; it will break only foracock's crow. ကြက်မတွန်၍ မိုးမလင်း၊ ကြက်ဖတွန်မှ မိုးလင်းသည်။
21.Desire for haste is delay. အလျှင်လို အနှေးဖြစ်။
22.Discard only bad baskets and punnets, not bad sons and daughters.
23.Do not spareabullock orawife. မယားနဲ့နွား မသနားနဲ့။
24.Do not tread onaheap of thorns because you have faith in you karma.
25.Eatasection of garlic; you smell of garlic. Eat two sections; you smell the same. တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်၊ နှစ်တက်စားလည်းကြက်သွန်။
26.Eczema comes on the leprosy place.နူရာ ၀ဲစွဲ။
27.An ember about to blaze glows brightly. တောက်မည့်မီးခဲ တရဲရဲ။
28.Empty pockets, empty promises. ငွေမရှိ စကားမတည်။
29.An error may go on for ever, but it can be set right inamoment. ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ။
30.Even if you do not love him (her), hold your breath and kiss him (her), even if you do not kiss him (her), heaveasigh.မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း၊ နမ်းသော်လည်း ပင့်သက်ရှူ။
31.Falling face downwards in the front of the tiger. ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲ။
32.Fetching water in an open wicker basket. ခြင်းကြားနဲ့ ရေသယ်။
32.Flipping Sesame seeds into an elephant's mouth. ဆင်ပါးစပ် နှမ်းပက်။
33.A floor which has no binding is in disorder. အကွပ်မရှိကြမ်း ပရမ်းပတာ။
34.Fondleadog and it will lick your face. ခွေးကလေး အရောဝင်တော့ ပါးလျက် နားလျက်။
35.The future price will be fixed in the future; sell it at the current price.
36.Going to Plow and forgetting the cattle. လယ်ထွန်သွား နွားမေ့။
37.A good beginning ensuresasatisfactory ending. အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ။
A good tree can lodge ten thousand birds. သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်။
Grass depends on the island, the island on the grass. ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီ။
Great desire obtains little. အလိုကြီးက အရနည်း။
Guests only come toahappy house. အိမ်သာလို့ ဧည့်လာ။
He asked for bones because he wants flesh. အသားလိုလို့ အရိုးတောင်း။
He breathes through someone Else's nose. သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှု။
He calls her aunt only when her cucumber fruits. ဘူးသီးသီးလို့ အရီးတော်။
He climbs up the pole of the marquee to show his alms-giving.
He does not catch the monitor lizard and he has lost his chopper. ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး။
He leans onawhite elephant and sucks sugar-cane. ဆင်ဖြူတော်မှီ၍ ကြံစုပ်။
He lives in the bushes but his spirits is in the heavens. လူနေချုံကြား စိတ်နေဘုံဖျား။
He may be poor, however intelligent he may be, if he has no karma. ကံမရှိ ဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ။
He praises the pickling of his own fish. ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်။
He rides without knowing whether it'sastallion or mare. ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်းအမမှန်း မသိ။
He was all right when he was sitting; only when he got up did I realize he was lame. ထိုင်နေတော့ အကောင်းသား၊ ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိ။
He who talks isn't strong; he who's strong doesn't talk. လူပြောမသန်၊ လူသန်မပြော။
He would like to rideadifficult buffalo but hasn't enough courage. မရဲဘဲ ကျွဲပြဲစီးချင်။
Husband and wife are like tongue and teeth. လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား။
I have no money to pay the debt and no land abscond to. ပေးစရာ ငွေမရှိ၊ ပြေးစရာ မြေမရှိ။
Ifaneedle can pierce it don't chop with an axe. အပ်ဖြင့် ထွင်း၍ရလျှင်၊ ပုဆိန်ဖြင့် မခုတ်ရ။
If the beginning is good, the end must be perfect. အစကောင်းလျှင် အနှောင်းသေချာမည်။
If the cattle are scattered the tiger seizes him. နွားကွဲလျှင် ကျားဆွဲမည်။
If you do not know, ask; if it not clean, wash.မသိလျှင်မေး၊ မစင်လျှင်ဆေး။
If you don't believe me , ask my wife.မယုံရင် ငါ့မယားကိုမေး။
If you want to go fast, go the old road.အလျင်လို လမ်းအိုလိုက်။
If you desire is great you obtain little.အလိုကြီးက အရနည်းသည်။
Ignorance is more troubles me than poverty. မရှိတာထက် မသိထာခက်သည်။
Inabasket it is the binding, inaman it is his clothes. တောင်းမှာအကွပ်၊ လူမှာအ၀တ်။
In journeying at improper time, one step; in eating improper food, one mouthful is sufficient to course mishap. အစားမတော် တစ်လုပ်၊အသွားမတော် တစ်လှမ်း။
It is for bird to fly and die; it is for man t5o scheme and die. ငှက်သည် ပျံရင်းသေသည်။ လူသည် ကြံရင်းသေသည်။
Just as the breeze carries the flower's fragrance, so do men carry Men news.
Karma watches over your property; your intelligence watches over your life.
Loss of good is one day spoiled; loss ofahusband isaruined life.
The man from hell is not afraid of hot ashes. ငရဲကလူ ပြာပူမကြောက်။
Mice cease to fear the cat when she is too old. ကြောင်အို ကြွက်မလေး။
Minds together, bodies apart. စိတ်ပေါင်းကိုယ်ခွာ။
Moderation is medicine, excess is peril. လွန်ရင်ဘေး၊ တန်ရင်ဆေး။
The moon shinning in the hollow of the bamboo. ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာ။
More money always wins the cause. ငွေများ စကားနိုင်။
A motherless son isafish in low water. အမိမဲ့သား ရေနည်းငါး။
Nearafisherman one isafisherman; nearahunterahunter.တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး။
No lawyer is infallible, noradoctor immortal. မမှားသော ရှေ့နေ၊ မသေသော ဆေးသမား။
The oar broke while the boat was going. လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုး။
Offeringasword-hilt toathief. သူခိုး ဓါးရိုးကမ်း။
Old bullocks are partial to tender grass. နွားအို မြက်နုကြိုက်။
Once you have died you know how to lay out the corpse. တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားလည်။
One can but fall to earth or rise to the golden umbrella. သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီး။
One day, six feet, where will Bagan move to ? တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ရွေ့။
One day to die, and one day to born. သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့။
One inathousand mothers bears such sons. မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား။
One needsafull stomach to keep the precepts.အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မည်။
One sesame seed will not make oil. နှမ်းတစ်စေ့နှင့် ဆီမဖြစ်နိုင်။
One's bed isathrone if one thinks to be so. ကိုယ်ထင်လျှင် ခုတင်ရွှေနန်း။
Only the sufferer knows how his belly aches. ကိုယ်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ။
Only when the thief has run away do the tatto spots show their power.သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ။
Picking up frogs withaperforated bag. ပလိုင်းပေါက်နှင့် ဖားကောက်။
Pinning for the aunt rather than the mother. အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း။
Playingaharp beforeabuffalo. ကျွဲပါးစောင်းတီး။
Property is guarded by luck.ဥစ္စာကံစောင့်။
Rain water leaks through the roof-top.ခေါင်က မိုးယို။
Riding on the same boat, going on the same journey. တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွား။
Rubbing liniment on the unaffected spot. မရောင်ရာ ဆီလူး။
Searching foralime before he gets the hare. ယုန်မရခင် သံပရာရှာ။
Setting fire to the granary because one cannot beat the mice.ကြွက်မနိုင် ကျီမီးနဲ့ရှို့။
She wears the flower when it hasasweet scent, but discards it when it has lost its scent.
Silence is worthathousand pieces of silver.ဆိတ်ဆိတ်နေ ထောင်တန်။
The snare was set to catchahare but the cat was caught. ယုန်ထောင် ကြောင်မိ။
The son is one month older than his father. အဖေထက် သားတစ်လကြီး။
The stick falls on the sore. အနာပေါ် တုတ်ကျ။
Store up the water while it rains. မိုးရွာတုန်းရေခံ
Teasing eventually turns to quarrel. အကျီစားသန်လျှင် ရန်ဖြစ်သည်။
Teeth that are going to chew foralong time must avoid bones.
ကြာကြာဝါးမယ့်သွား ဘာစားစား အရိုးကြည့်ရှောင်။
Those who are unaware walk over it, those who are aware unearth it and eat it.
Throwing sand at the meat he cannot eat. မစားရတဲ့အမဲ သဲနှင့်ပက်။
The tiger who courts death moves to another jungle. သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း။
Timidity relieves one of responsibility. ကြောက်တတ်လျှင် ၀န်ကင်းသည်။
To be ignorant is worse than being poor. မရှိတာထက် မသိတာခက်။
To dig one's grave with one's own hands. ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူး။
Too many doctors and the son dies. ဆရာများ သားသေ။
Too much carp makes the curry in stupid. ငါးသိုင်းများ ဟင်းဟုံ။
Too much talk will include errors. စကားများလျှင် အမှားပါမည်။
The top ofapinnacle now, firewood soon. မှန်ကင်းတစ်လှည့် ထင်းတစ်လှည်။
Traveling by raft and yet thirsty. ဖောင်ဆီးရင်း ရေငတ်။
Trustaslave you lose an eye; trust your children you lose both.
Until timber is available, use bamboo asagirder.သစ်မရခင် ၀ါးကူ။
A village ox does not feed on village grass. ရွာနားကမြက် ရွာနွားမစား။
Water falling into sand. သဲထဲ ရေသွန်။
Wax will show the quality of gold. ရွှေအကြောင်း ဖယောင်းသက်သေတည်။
When an elephant shrinks it's stillabuffalo. ဆင်ပိန်တော့ ကျွဲ။
When diamonds are being sold, the tobacco-stalk merchant is in the way.
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းနေသည့် အခါ၌ ဆေးရိုးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့်..
When I work for my living the rains are suffer from drought., when I steal for my living the dogs bark.
When the disease is not known there is no remedy. အနာမသိ ဆေးမရှိ။
When your strength is not sufficient, humble yourself. အားမတန် မာန်လျှော့။
Where there isaquestion, there must be an answer. အမေးရှိလျှင် အဖြေရှိရမည်။
While being troubled by snakes, he is harassed by centipedes. မြွေပူရာ ကင်းမှောင့်။
The whole boat is putrid because ofasingle carp. ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်။
A woman's modesty cannot be bought with gold. မိန်းမတို့အိန္ဒြ ရွှေပေး၍မရ။
You will faceahundred problems in your lifetime though you may not live that long.
မူရင်း သုတစုံလင် ကမ္ဘာတခွင်